असार १३ बाट यी राशी मालामाल हुने ! हेर्नुहोस् कुन राशी हुनेछन् कंगाल ! - Sudur Khabar
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७५, शुक्रबार ०६:४८
शौर्य, साहस, बल, पराक्रमको प्रतिनिधि ग्रह मंगल आषाढ १३ बाट आफ्नो उच्च राशि मकरमा राशी परिवर्तन गर्दै छ। लगभग तिन महिना पछि मंगल ग्रहले रशी परिवर्तन गर्न लागेको हो। यस क्रममा विभिन्न राशिलाई फरक-फरकका लाभ मिल्ने हुन्छ। यदि कोहि व्यक्ति मंगलको महादशा, अंतर्दशा देखि ग्रषित रहेको छ भने यस अवस्थामा झन् धेरै दुख खेप्नु पर्ने हुन्छ।
यस राशि हुनेहरुको एकादशी भावमा मंगल ग्रह रहने हुँदा आयको श्रोतमा असर पर्न जाने गर्छ। यस समयमा ऋण नलिएकै उचित हुने देखिन्छ।लेन-देनको कारमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तर पहिला फसेको पैसा भने धेरै कष्ठसँग उठाउन यस भएका व्यक्तिहरु सफल हुने देखिन्छ।